Ny tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro – jEreo Ato
Publié le 9 mars 2019 9 mars 2019 - 2 minutes de lecture Catégories SantéÉtiquettes Kitrotro, Madagasikara
Ny aretina kitrotro dia aretina hita manerana an’izao tontolo izao fa tsy eto Madagasikara ihany. Haingana be ny fifindran’izany aretina izany amin’izao fotoana izao ary efa maro ny olona matin’ity aretina ity indrindra fa eto amintsika. Mba hanampiana antsika ary hiadiana aminy dia indreto misy fahalalàna tsara ho fantatra momba ny aretina kitrotro.
Inona moa no antsoina hoe kitrotro?
Ny kitrotro dia aretina mora mifindra avy amina karazana virosy antsoina hoe paramyxovirus. Ny tena ahafantaran’ny maro azy dia ilay misy fibotsimbotsinana madinika menamena iny, izay mitambatambatra mameno ny vatana manontolo.
Ity aretina ity anefa dia matetika ny zaza no tena itrangany, raha mbola tsy vita vaksiny indrindra indrindra. Raha efa vita vaksiny kosa moa ny zaza iray dia azo lazaina fa efa manana hery fiarovana ka tsy dia hatahorana loatra amin’ilay aretina izy.
Na izany aza anefa mila mitandrina ihany. Izany hoe tsy manao “salama mitady aretina”, fa manao ny tokony atao hisorohana aminy.
Ny fomba fisehon’ny kitrotro
Ireto misy tranga vitsivitsy hamantarana raha voan’ny kitrotro ny olona iray : mikohaka izy, mandoa, mirotsaka ny ranon-delony, mety tsy azoazo ihany koa ny ain’ilay olona. Ankoatr’izay dia maloiloy, marary kibo ka mety mivalana ary mety mivonto mihitsy aza ny masony.
Raha ahitana iray na maromaro amin’ireo izany ny olona iray na ny zaza ao an-tokantrano dia tokony ho mailo isika Ray aman-dreny. Miampy izany, raha mahatsikaritra isika hoe kizitizitina ilay zaza ka mitomany amin’ny zavatra tsy misy antony akory, dia tokony entina ho zahàna izy.
Ireo trangan’aretina ireo izany no ahalalàna fa voan’ny kitrotro marina ilay olona na ilay zaza. Ny azo antoka anefa dia ny manatona mpitsabo mba hanamarinana ny ahiahy na handisoana izany.
Fitsaboana ny kitrotro
Raha ny momba ny kitrotro dia tsy misy ny fanafody natao hanasitranana azy. Kanefa mba hanalefahana ireo tranga mpahazo rehefa tojo an’io aretina io dia misy ny fanafody ho amin’izany.
Misy ohatra ny fanafody hampihena ny tazo, ny kohaka mahazo ilay marary. Afaka mampiasa vitamina A ihany koa raha voan’ny kitrotro. Etsy ankilany dia misy ny tsara atao rehefa voan’io aretina io.
Ohatra amin’izany ny misotro rano betsaka mba hamerenana ny rano very raha sanatria mivalana ilay olona. Tsara indrindra ihany koa ny maka aina tsara ho an’ny olona na zaza voan’ity aretina ity.
Fisorohana ny kitrotro
Ny tokony hatao hisorohana amin’ny kitrotro ho an’ny zaza dia tokony atao vaksiny izy dieny mbola kely. Izany ihany koa no atao mba hisorohana amin’ny aretina hafa rehetra mety hitranga na tsy kitrotro aza. Tsy voatery ny zaza ihany anefa no atao vaksiny fa ny olon-dehibe ihany koa mba ho fanefitry ny kitrotro.
Marihina moa fa ity aretina ity dia aretina malaky mahafaty raha tsy tsy voatsabo haingana ilay marary. Noho izany dia mety ny manatona dokotera raha misy ny tranga mampiahiahy mahazo ny olona na zaza iray.
Fihetsika tsotra atao rehefa voan’ny kitrotro
Ireto misy fihetsika tsotsotra tsara atao mba hampihena ny fihanaky virosin’ny kitrotro amin’ny toerana misy ny tsirairay.
Manasa tanana matetika
Manasa ny oron‘ny ankizy amin’ny alalan’ny “sérum”
Saronana ny vava rehefa mikohaka
Diovina tsara ny zavatra nampiasain’ny marary
Tsy mifanoroka amin’ny olona marary
Tsy atao mihiboka ny trano
Tsara ho an’ny ankizy ny manapaka ny fianarany aloha raha voan’ny kitrotro mba tsy hamindra amin’ny mpiara-mianatra.
Sary : Semevent ao amin’ny Pixabay
Une mineure de 17 ans vendue sur Facebook au Soudan du Sud